आफ्नै चेला विप्लवलाई सिध्याउन कस्ले उचालिरहेछ गृहमन्त्री बादललाई ? - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
आफ्नै चेला विप्लवलाई सिध्याउन कस्ले उचालिरहेछ गृहमन्त्री बादललाई ?
प्रकाशित मिति : बिहिबार, जेष्ठ ३१, २०७५
कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिट्ब्यूरो सदस्य भरत बम ‘रणवीर’ले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गरेको कामप्रति टिप्पणी गरेका छन । उनले थापाको कामलाई सुधारात्मक भएको भन्दै त्यसले समग्र जनताको जीवनमा ठूलो परिवर्तन नल्याउने बता ।
नेता रणवीरले थापाले इन्जिन बिग्रेर समुन्द्रमा डब्न लागेको पानी जहाजमा परेका प्वाललाई बन्द गरेर जोगाउन प्रयास गरेको बताएका छन ।
रणवीरले सामाजिक संजालमा लेखेका छन, “यो इन्जिन बिग्रेर समुन्द्रमा डुब्न लागेको पानी जहाजलाई त्यस्मा देखिएको प्वाल बन्द गरेर जोगाउने कोशिस हो, जो न वैज्ञानिक छ न त सम्भव नै ।”
राज्य नै दलाल चरित्रको भएको भन्दै रणवीरले देश र जनताले भोगिरहेको संकटको समाधान कुनै मन्त्रीको काम गर्न नसक्ने बताउँदै भने,“विद्यमान दलाल पुँजीवादी राज्यको कारण एकपछि अर्को देश र जनताले भोगिरहेको संकटको समाधान न अहिलेको राज्यसत्ताले न त कुनै मन्त्रीले नै गर्न सक्छ ।”
उनी लेख्छन्, “हाम्रो देशमा आधा महिनामा आधा दर्जन पटक महंगी बढ्दैन्थ्यो । महङ्गीको चर्को मार खेप्न बाध्य जनताले सुन तस्करलाई कारबाही गरिरहेका बादलबाट के अपेक्षा गर्नसक्छन । यसमा बादलको कतै विरोध छ ? मोदीको सुरक्षाको नाममा भारतीय सेनाको मार्चपास हुँदा बादलको गृहप्रशासन के गरिरहेको थियो ?”
एक प्रसंगमा उनले “अहिले उहिलेको सिज (सिने जलजला) अभियानका सर्जक बादल सोही अभियानका सिर्जना विप्लवलाई मास्ने अभियानमा लाग्न बाध्यछन । किनकि, आजको राज्य बादल मास्न रामबहादुर, प्रचण्ड मास्न पुस्पकमल, जितबीर मास्न डा. बाबुरामलाई लगाइरहेको छ । सायद, आजभोलि मनमनै बादललाई बादल हैन रामबहादुरको पहिचान प्यारो लाग्न थालेको छ ।
यो पनि सुधारात्मक अभियानकै प्रतिफल होला कि ?” रणवीरले समाजिक संजालमा लेखेका छन । उनले अन्त्यमा क्रान्तिको विकल्प सुधार हुन नसक्ने भएका छन ।
डडेल्धुरामा जिप दुर्घटना : दुई जनाको मृत्यु, १७ जना घाइते
नेपाल प्रहरीलाई दिइयो ‘डिजिटल गर्भनेन्स अवार्ड’
तिहारको मुखमा डोल्पामा जीप दुर्घटना, १० जनाले गुमाए ज्यान !
झापामा भएको सवारी दुर्घटना परि एकको मृत्यु, तीन घाइते